'Daayinoosarii lafarraa kan balleesse milkaa'ina isaati' - BBC News Afaan Oromoo
'Daayinoosarii lafarraa kan balleesse milkaa'ina isaati'
Heelan Biriigs BBC News
Goodayyaa suuraa T. rex, bineensota foon nyaatan guddicha lafarra jiraate ture
Qorannoon attamitti akka Dayinosaroonni guutummaa addunyaarra faca'an faana dhahu tokko bineesi kun lafarraa baduuf sababiin milkaa'inumasaa ta'uu akka malu agarsiisa.
Qorattoonni UK Dayinosaroonni osoo gophoon aduutti marsu (asteroid) isaan hin miidhiin dura lakkoofsi isaanii hir'achaa akka dhufe amanu. Sababin isaas, jedhu qorattoonni kun, dachee kanarra lafa isaan hin qubatiin hin jiru ture jedhama.
Bakka irraa ka'an Ameerikaa Kibbaatii, Dayinosaroonni "Pilaanetii guutuudhaaf jedhanii sochii bifa weerara haaloo qabu fakkaatuun" godaanan.
Akaakuun Dayinosaroos dhibboota hedduutti lakkaa'aman baayyee sodaachisaa kan ta'e T. Reeks jedhamu kaasee hanga baay'ee guddicha mormaa dheeratu Dippiloodokes jedhamuutti mul'atanii turan.
Yeroo gophoon kun (asteroid) isaan fixutti garuu, dacheen itti dhiphataa waan dhufteef lakkoofsi isaanii hir'achaa dhufee ture.
Qorannoon Joornaalii, 'Nature Ecology and Evolution', jedhamu daandii Dayinosaroonni Ameerikaa Kibbaa keessaa ittiin ba'an faana dha'ee ilaale.
"Takkaamatti ifatti mullatanii saffisaan guutummaa dacheerra babal'atan," jedhu Dr. Kiriis, Yunvarsiitii Riidingitti qorataa dhimma kanaa kan turan.
Dayinosaroonni carraa 'dhumaatii ' Du'a Guddicha' dachee kanarratti dur uumamee ture fayyadamuun babal'atan, jedha qorataan kun.
Saffisaan guutummaa pilaanetii mancaatee turte kanarra, carraa argatan mara fayyadamuun, lubbu qabeeyyii biroo irraa morkiin cimaan osoo isaan hin mudatiin babal'achuu danda'an.
Gara dhuma guutummatti dachee dhaalanii dacheerra bakka kamiyyu jiraachuu yeroo baraa dhufaniitti garuu ciminaan babal'achuun isaanii gadi xiqqaate. Dayinorasoonni akaakuu balali'oo ta'an kan yeroo ammaa simbirroota ta'an qofatu ofkale.
"Dachee guutan, bakki deemanillee hin turre. Naannoo deemanii jiraatan hundatti baruufi jiraachuu waan haalaan danda'aniif sanyii haarawaa uummachuu/qabachuu hin dandeenye. Kun ammoo simbirrootarraa kan hafe bakka awwaalcha isaanii isa dhumaa ture," jedhu Dr Siyara O'Donovan Yunivarsiitii Riidingirraa.
"Akaakuun Dayinosaroonni guutummaatti kan walitti fufinsaan baballata dhumaatii guddichaa irraan kan ka'e yeroo pilaanetiin kun qaamota xixiqqaatti addaan cicitudha," jedhu Prof David Martill Yunvarsitii Poortismawozirraa.